Tag: mkpuchi | Martech Zone
Dika ihe dijitalụ na-aga n’ihu ịbụ ebe kachasị elekwasị anya maka ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka Ego, njem ndị ahịa (njiri mara dijitalụ ahaziri iche gafee ọwa) bụ ntọala nke ahụmịhe ahụ. Biko sonyere anyị ka anyị na-enye nghọta maka otu esi emepe njem nke gị maka inweta, ịbanye, njigide, yana ịbawanye uru na atụmanya gị na ndị ahịa gị. Anyị ga-elelekwa njem ndị kachasị emetụta ndị ahịa anyị. Webinar Datebọchị na Oge Nke a bụ
OneLocal: Otu Akụrụngwa nke Ahịa nke Azụmaahịa mpaghara
Tọzdee, Ọktoba 12, 2017 Fraịde, Ọktọba 13, 2017 Douglas Karr
OneLocal bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa emere maka azụmaahịa mpaghara iji nwetakwu ndị ahịa na-ejegharị, ndị na-ezo aka, yana - n'ikpeazụ - ịba ụba ego. Ihe ikpo okwu a lekwasịrị anya n'ụdị ọrụ ụlọ ọrụ mpaghara ọ bụla, gbasara ụgbọ ala, ahụike, ahụike, ọrụ ụlọ, mkpuchi, ezigbo ụlọ, ụlọ ahịa, spa, ma ọ bụ ụlọ ahịa mkpọsa. OneLocal na-enye ụlọ ọrụ iji dọta, jigide ma kwalite obere azụmaahịa gị yana ngwaọrụ maka akụkụ ọ bụla nke ndị ahịa. Ngwaọrụ igwe ojii nke OneLocal na-enyere aka
Amụma: Azụmaahịa Gị Ga-abụ Azụmaahịa E-commerce
Thursday, June 11, 2015 Tọzdee, Ọktoba 29, 2020 Douglas Karr
You hụla ebe anyị mepere emepe? Ọ dị ezigbo ịtụnanya. Anyị na-arụ ọrụ na aghụghọ na mmepe nke mbipụta anyị maka ihe karịrị ọnwa 6 ma enweghị m ike ịgwa gị oge ole anyị nọrọ. Ihe iseokwu bụ naanị na anyị enweghị ike ịzụlite ngwa ngwa nke imecha ngwa ngwa. N'uche m, onye ọ bụla nke wetara isiokwu site na ncha taa na-arụ ọrụ adịghị mma na azụmaahịa ha na-arụ ọrụ. Enwere m ike ịpụ apụ
Agha maka Igbe mbata
Saturday, April 26, 2014 Friday, April 25, 2014 Douglas Karr
Ná nkezi, ndị debanyere aha na-enweta ozi email email 416 kwa ọnwa… nke ahụ bụ ọtụtụ ozi ịntanetị maka nkezi mmadụ. Ọtụtụ mmadụ na-agụ ozi ịntanetị na-ekwu banyere ego ha na njem ha karịa ụdị ọ bụla ọzọ… yana ọ dị mkpa iburu n'uche na ndị debanyere aha anaghị edebanye aha email gị - ha na-edebanye aha gị. Gbaa mbọ hụ na emebere email gị nke ọma ma na-anabata ngwaọrụ mkpanaka bụ opekata mpe. Inwe email di egwu nke bu nke